China Wooden super bass USB bluetooth 2.0CH stereo audio sound Hi-Fi hifi bookhelf speaker (BT-106) Ukwenziwa kunye nefektri | Eyin
I-Wooden super bass USB i-Bluetooth 2.0CH yesandi yesandi yesandi yesithethi esishelufu yeencwadi (BT-106)
Ukunikezelwa kwamandla: AC110V ~ 240V 50-60Hz
Icandelo lokuqhuba: 4 ″ x2 + 1 ″ x2
Imveliso Isiphumo: 60W
Ukuphendula rhoqo: 60Hz ~ 20KHz
Ubungakanani beMveliso: W160xD220xH275MM
• Igalelo le-1XAUX -Udibaniso olufanelekileyo kuso nasiphi na isixhobo esinemveliso yehedfoni eyi-3.5mm okanye imveliso yeRCA emibini.
• Uhlobo lweBluetooth- Kulula ukudibanisa isixhobo ngeBluetooth ukuze wonwabe kumculo omnandi.
• Ungeniso lwe-USB-Dlala umculo ngesixhobo se-USB.
• UMGANGATHO WESITudiyo-Ukuveliswa kwakhona kwesandi esivela kwi-13mm yesilika yedome tweeter kunye ne-4 intshi yeeyunithi ezipheleleyo.
• I-CLASSIC WOOD FINISH - Umgangatho ophakamileyo wokwakha iinkuni ze-MDF ogqityiweyo ngefuthe leenkuni IVinyl isebenza njengeyona nto incomekayo kuyo nayiphi na into yokuhombisa ekhaya.
Izipikha zeelelufu zeencwadi ze-BT-106 zidibanise ukujonga kwe-retro kunye noluvo lwangoku lomgangatho weaudio. Ukuba ujonge izithethi ezishelfini ezinamaxabiso afikelelekayo nezinexabiso eliphantsi ezinesandi esingahambelaniyo nesithethi sehelf BT-106 yinkqubo yakho yesithethi esiya ku-2.0. Inomqhubi we-4-intshi ye-bass kunye ne-calibrated, evulekileyo ye-bass reflex port, le nkqubo yesithethi se-shelf yencwadi ihambisa amanqaku atyebileyo, atyebileyo agcwele ubukho kunye nobunzulu. Imveliso yesandi ethembekileyo kunye nokusebenza kwe-BT-106 naziphi na izinto eziphuphayo. Uninzi lwabathengi be-Edifier basebenzisa i-BT-106 izithethi zeshelf ezinamandla zokuqhagamshela izixhobo zabo zamava alungileyo. Yonwabela i-vinyl yakho yakudala ngelixa ukonwabela ukuqhubela phambili kubuchwephesha bomsindo wemihla ngemihla.
Yenza ukuba amava akho okumamela enziwe kunye ne-bass, treble kunye nevolumu yokudayala kwisithethi esisebenza kwishelufa yeencwadi. Isandi esisemgangathweni esivelisiweyo senza ezi zithethi zishelufu yeencwadi zizisa eyona midrange ikhulayo ethe yanika umdla kuye nawuphi na umvavanyi. Ukulawulwa okukude okune-compact kufakiwe. Ungahlengahlengisa ivolumu kwaye usete izithethi ukuba zithule xa zifuneka ngaphandle kokufikelela kwizithethi; amandla kunye nokugqibelela ezandleni zakho. I-Edifier R1280T iza nolawulo lwethoni eyakhelweyo ecaleni kwesithethi esisebenzayo. Kuxhomekeka kukhetho, ungenza uhlengahlengiso oluncinci lokuhamba kunye neebhasi ukusuka -6 kuye +6 db. Ulawulo lwevolumu yedijithali isetwa ngokuzenzekelayo kwinqanaba lokukhululeka ngalo lonke ixesha izithethi zivuliwe.
Igalelo leRCA ezimbini
Izithethi zeishelufu zeencwadi ze-BT-106 zikuvumela ukuba uqhagamshele kwizixhobo ezininzi zeaudiyo usebenzisa amagalelo amabini eRCA. Ngokujonga kwiphaneli yangasemva unokuxela ngokulula enye yezi sisithethi esingacacanga kwaye esinye sisithethi esisebenzayo. Isithethi esisebenzayo sinamagalelo amabini abekwe ngasemva. Ezi galelo zilungile kwi-RCA ukuya kwi-RCA okanye i-RCA kunxibelelwano lwe-AUX. Qhagamshela kwiPC, ilaptop, ithebhulethi, umnxeba okanye irekhodi player. Izithethi zixhumene omnye komnye ngetambo yesithethi esiqhelekileyo. Iindidi zeentambo zibandakanyiwe ziqinisekisa ukuba abathengi bethu bonwabela umculo wabo kwizixhobo ezininzi ngaphandle kwebhokisi.
Egqithileyo Umgangatho ophezulu we-MAXX BASS touch bar yesandi kunye ne-2.4G wireless subwoofer (SP-602 ene-subwoofer)
Okulandelayo: Isithethi seTV seMidlalo ePhakamileyo ye-2.0, Isithethi seBluetooth yeSithethi (SP-600B)
Ibha yesandi yeBluetooth engenazingcingo
Isithethi seBluetooth encinci engenazingcingo
Somlomo ophathwayo ongenazingcingo weBluetooth
Ixabiso leSithethi seRGB esithethi seBlue W ...
I-2020 yoyilo olwahlukileyo olunemisebenzi emininzi yesandi esincinci ...
USB eziphathekayo 2PCS desktop desktop / laptop s ...
Factory Ixabiso Lixabiso 2.0 Ubungakanani obuncinci beKhompyutha Spe ...
ODM ukuvelisa izithethi hifi iinkuni umsi Hom ...
Isithethi seShelfher yamandla ePhakamileyo yoMthi weKhaya ...
Ibar yesandi yeWifi yeTv, Ibar yesandi, Izithethi zeWifi zeSandi, I-TV kunye ne-Soundbar Mount, Ibar yesandi ye Alexa, Iibhola zeSandi zeTv,